Awooda hirarka si ay u dhaliyaan tamar | Cusbooneysiinta Cagaaran
Awoodda hirarka si ay u dhaliyaan tamar
Adrian | | Tamarta Wave, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Teknolojiyada cusub
Dhaqdhaqaaqa hirarka badda iyada xoog wuxuu leeyahay awood weyn oo wax soo saar koronto Tamarta noocan ah waxaa loo yaqaannaa awoodda mawjada.
Waxay ku habboon tahay waddamada leh xeeb ballaaran oo ku yaal dhulalkooda.
Tani waa isha tamar dib loo cusboonaysiin karo oo nadiif ah taas oo lagu qiyaaso inay leedahay awood ay ku soo saarto 2000 gigawatt oo tamar ah.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo soo saaro tamar ka timid dhaqdhaqaaqa hirarka badda. Tan ugu adeegsiga badan ilaa hadda waa nidaam ay kujiraan buusha koronto oo badda dhexdeeda ah oo dhaqaajisa bistoolad iyo tan, markeeda, matoor dhaliya tamarta korantada. Korontadu waxay ku soo degtaa iyada oo loo marayo fiilooyinka badda hoosteeda mara.
Ingriiska qalab aad u rajo badan ayaa loo sameeyay si si hufan loogu soo qabto tamarta mowjadda ee loo yaqaan anaconda.Waa tuubo caag ah oo aad u dheer oo xidhan labada dhinacba biyona ku jiraan. Waxay quusinaysaa inta u dhexeysa 40 iyo 100 mitir.
Hawlgalku waa mid fudud, markay mawjadaha xoog ku socdaan, tubbada ay ka buuxaan biyaha ayaa dhaqaajinaya oo riixaya inay ka baxdo hal dhinac waxaa jira matoorro bilaabaya inay shaqeyso xooggan waxayna dhalisaa koronto oo markaa fiilooyinka lagu soo gudbiyo.
Faa'iidada noocani waa in ay ka raqiisan tahay noocyada kale ee tikniyoolajiyadda, kharashka dayactirka oo hooseeya iyo in uu iska caabin badan karo muddo ka dib.Bortaqiiska ayaa ka mid ah waddamada adeegsada qaabkan oo qorsheynaya in ay ballaariyaan mustaqbalka dhow.
Xitaa farsamada mawjadaha Waxay ka maqan tahay horumarin dheeraad ah si loo gaaro natiijooyin wanaagsan iyo hoos u dhigista kharashyada maalgashiga, maadaama ay sarreyso illaa hadda.
Laakiin dalal badan oo badan ayaa xiiseynaya ilaha tamarta, taas oo hubineysa in maalgashiga lagu sii wado hagaajinta ama abuurista teknolojiyad awood u leh ka faa'iideysiga tamarta ay soo saaraan hirarka iyadoo leh saamaynta deegaanka oo hooseysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Wave » Awoodda hirarka si ay u dhaliyaan tamar
Waxaan ahay Esteban Thomas, waxaan rabay inaan kuu sheego in maanta aan bartay laba shay oo cusub ... Waxaan u maleynayaa inaan sifiican uga faa ideystay waqtigeyga. Waxaan balanqaadayaa inaan sii wadi doono horumarka iyo aaminaada wiilasha ka socda «xafiiska» ...
Ku jawaab Ethomas
Qaabkan cusub ee loo soo saaro tamarta waa mid aad u xiiso badan, waa nidaam aan rajeynayo in dalal badan ay dooran doonaan inay soo saaraan, gaar ahaan maxaa yeelay waxaa lagama maarmaan ah inaan bilowno daryeelka daryeelka meeraheena / Venezuela
Ku jawaab milvida
Kheyraadka tamarta iyo horumarinta dhaqaalaha
Basaska bey'ada ee magaalooyinka Isbaanishka